Sida looga saaro buuqa fiidiyowyada shaashadahaaga shaashadaha | Laga soo bilaabo Linux
Sida looga saaro buuqa fiidiyowyadaada shaashadda ah
Shalay, waxaan sameynayay fiidiyoow aan kula wadaago, sidaad ogtahay, ma haysto makarafoon tayo leh marka waxaan ku tiirsannahay midka ku jira kamaradeyda webka. Nasiib darrose, in kasta oo dadaalkaygii ugu fiicnaa, waxay duubeysaa qaylada asalka ah ee aadka u xanaaqa. Deminta "maraqa" ee baradhada baradhada, sida aan kalgacalka u idhaahdo, waxay umuuqatay hawl aan macquul aheyn… ilaa hada.
Markii aan dhammeeyo duubista fiidiyowga Vokoscreen, waxa kaliya ee aan sameeyay ayaa ahaa inaan furo faylka .AVI ee Audacity. Tani waa war aniga ii ah aniga oo aanan ogeyn in Audacity uu caqli leeyahay oo kaliya inuu codka ka qaato fiidiyowga oo uu la shaqeeyo. Waa hagaag waa ...
Nidaamka looga saaro sawaxanka waa midka caadiga ah ee Audacity.
1. Xulo qayb ka mid ah wadada halka kaliya laga maqlo dhawaqa asalka ah (badanaa bilowga).
2. Dhageyso qeybtaas markale si aad u hubiso inaysan jirin wax qeylo ah oo udhaxeeya. Kadib,
3. Tag Waxtarka> Yaraynta Jabaqda oo xulo badhanka Faahfaahinta Buuq.
4. Taabo Ctrl + A, si aad wax walba u doorato oo aad u tagto Saamaynta> Sawax dhimista.
Maqal la'aanta: sida looga saaro buuqa gadaashiisa
5. Dejinta caadiga ah badanaa waxtar badan ayey leedahay. Sikastaba xaalku ha noqdee, waad ku badali kartaa hadba baahidaada. Ugu dambeyntiina, waa inaad riixdaa OK oo aad sugtaa in muddo ah maqalka si uu u dhammeeyo howshiisa.
6. Tag Faylka> Dhoofinta. Qor magac fayl ku habboon oo xulo nooca faylka MP3 ama midka aad ugu jeceshahay.
Su’aasha aad adigu isweydiineyso naftaada ayaa ah: sideen codka ugu soo celiyaa fiidiyaha? Jawaabtu way fududahay: adeegsiga tifaftiraha fiidiyowga sida Avidemux ama Openshot. Xaaladdayda, waxaan isticmaalay Openshot. Kaliya waxay ahayd inaan u jiido fiidiyowga si aan ula socdo, u joojiyo codka fiidiyowgaas, u jiido feylka codka la saxayo ee waddo cusub, ugu dambayntiina aan u dhoofiyo wax kasta feyl fiidiyoow cusub.
Midda dambe waxay ahayd mid aan laga fursan karin marba haddii ay ahayd inaan ku daro fiidiyaha shaashadda, muuqaalka kooban ee hordhaca ah ee ka muuqda bilowga. Intaas waxaa sii dheer, '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' video '' '' 'finalka' 'si toos ah ayaanu ugu soo galin karnaa YouTube-ka 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida looga saaro buuqa fiidiyowyadaada shaashadda ah
Waad ku mahadsantahay tilmaanta, waqtiga ku habboon.
Ma jiraan wax la mid ah "waqtiga uun". 🙂
Tijaabiyey oo shaqeeyaa Perfect!
Aad u fiican, waa la qiimeeyaa!
Talo wanaagsan si loo yareeyo buuqa.
Wanaagsan, waxay iga caawineysaa xoogaa Postcast ah oo aan la wadaago. Salaan.
Weyn, aad baad u mahadsan tahay 😀
Mawduuca ka baxsan: Sidee ayuu Firefox 23 ugu muuqdaa OSX?
Wanaagsan! Fadlan sii wad qoritaanka maqaalada ku saabsan barnaamijkan, waa in ay jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan. Mahadsanid.
Ku jawaab Carlos_Xfce
Waayahay Waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo. 🙂
Si aad madax ugu noqoto kuwa ugu cadcad, Aad u wanaagsan!
Wanaagsan! Way fiicantahay inay u adeegto ...
Aniga iguma shaqeynayo ogg, ma aqaano inay tahay qaabka ama mishiinkeyga, laakiin way sii socotaa oo ma soo dejin karo fiidiyowga si geesinimo leh.
Waxaan ku tijaabiyey avi. Waxay ila tahay inay sidoo kale la shaqeyso mpeg.
Ii sheeg haddii aad xal u hesho inaad ka soo dejiso codka ogg.
Waan ku jeclahay: '), wax badan ayey i caawisay
Beddel Wakiilka Isticmaalaha Chrome adoo adeegsanaya bedelka wakiilka isticmaalaha